डाक्टरकाे कोभिड डायरी : एक्लै गाउँको अस्पताल धान्नुपर्दाकाे सकसपूर्ण भोगाइ
आषाढ १४, २०७८ २०:४१ मा प्रकाशित
कोभिड दोश्रो लहरमा कोभिड अस्पताल बरेङकाे जिरो अवस्थाबाट सुरु भएको यात्रा ३९ दिनमा ४९ जना बिरामीमध्ये २ प्रतिशतलाइ मात्र रिफर र बाकी ९८ प्रतिशत बिरामीलाई कोभिड अस्पतालमा राखी उपचार गर्न सफल भयाै‌ । निको भएर जाँदा १०० प्रतिशत बिरामी नै खुसी थिए । ५ दिन आगाडी अस्पतालमा भर्ना शुन्य भएको थियो । भर्ना बिरामीमध्ये ३० प्रतिशत मधुमेह, उच्च रक्तचार, दम, सिओपिडि र टिबीका बिरामी हुनुन्थ्यो जसलाई आइसियु नभई नहुने थियो ।
७० प्रतिशत मध्यम लक्षणका थिए जो १७ देखि ९३ वर्षउमेर सम्मका हुनुन्थ्यो । धेरै मेहनत पश्चात अस्पतालमा नयाँ भर्ना शुन्यमा आएको थियो । सायद नेपालमै हेर्ने हो भने दुर्गममा रहेर जहाँ एक्सरे छैन, आवश्यक इन्भेष्टिगेसन गर्ने ठाउँ छैन, यस्तो ठाउँमा एक जना मात्रै डाक्टरलाई सबै व्यवस्थित गर्न पक्कै पनि सहज थिएन ।
बिरामीलाई भर्ना गर्ने की पठाउने भन्ने निर्णय लिन पनि एक्लो डाक्टरलाई द्धिविधा हुनेनै भयो । फेरि सामाजिक रूपमा म नयाँ ठाउँमा थिंए त्यसैले पनि मलाई केही कठिन त थियो नै । पहिलोपल्ट बरेङ आउँदाको अनुभवलाई सम्झँदा, पोखराबाट विहान ६ बजे हिँडेको यहाँ आइपुग्दा रातिको १० बज्यो ।
त्यो भोगाइले मलाई लाग्यो मैले रिफर गर्ने बिरामीलाई पोखराको अस्पताल पुग्दा यो वर्खाको समयमा त्यही १८ घण्टा लाग्नेछ । यति लामो बाटोमा कतिको बाटोमै मृत्यु हुने पो हो कि भनेर मैले सकेसक्म रिफर गरिँन । बिरामी उपचारको क्रममा भएसम्मको सबै विधि अपनाइयाे। हाइ फ्लो अक्सिजन दिन पर्ने त्यो पनि १५ लेभलभन्दा बढी लगाउने मेशिन नभएकाले रिफर गर्न हामी बाध्य हुन्थ्याै‌।
रिफर गर्दा सुरुमै बेडको निश्चित गरेर मात्रै आफ्नो अस्पतालबाट अन्त पठायौं । सुगरका बिरामीलाई कन्ट्रोलमा ल्याउन धेरै गार्हाे भयो । इन्सुलिन र हेपारिन लगायतका tertiary level का सबै औषधिहरु काठमाडौं, पोखरा ,बाग्लुङका पसलहरुलाई रातारात मगाउँदै, कति त धौलागिरि अस्पताल, मणिपाल, पोखरा मेडीसिटीमा राखिएका इमर्जेन्सी औषधि डाक्टरलाई अनुरोध गरी मगाइयो ।
ड्यूटी स्टाफले डाक्टर औषधि सकियो भनेर भनिरहँदा अब बिरामी औषधि नपाएर मर्ने हुन कि भन्ने चिन्ता सधै‌ रहन्थ्याे । अक्सिजन भरेर सिलिण्डर २४ घण्टामा बल्ल यहाँ आइपुग्थ्यो । यहाँसम्म कि मैले प्रहरीलाई सम्म औषधि खोज्न लगाँए । पार्टी,संघ सँस्थाका साथीहरूसँग हारगुहार गरेँ ।
पालिका अध्यक्षज्यू युवा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि धेरै सहयोग गर्नुहुन्थ्यो । यस्तै स्वास्थ प्रमुखको साथ र सहयोग उत्तिकै थियो । मलाई लाग्छ कोभिड अस्पतालमा जागिर हाेइन हामीले आफ्नाे कर्तव्य पालना गर्याै‌ । मानवताको नाताले कर्तब्य निभाउन मात्रै लागियो, हामी सम्पुर्ण टीमनै। यदि जागिर गरेको भए ( सामान छैन, औषधि छैन, तपाईं अरु अस्पताल जानुस् भनेर बिरामीलाई भनिन्थ्याे होला ।
२ जना सिस्टरहरु सुरुको महिना २४ सै घण्टा ड्यूटी गर्नुभयो । दिनदिनै बिरामीको चाप बढदै जाँदा अब त धेरै गार्हाे भयो डाक्टर भन्दै एचडीयू स्टेसनमा रुँदै ड्यूटी गरेको र बेड बढाएर कलेजको कोठामा बिरामी राख्दा सरिता सिस्टर,डाक्टर म एकछिन आराम गर्छु भन्दै फोनमा राेएकाे त्याे दिन सम्झदा अहिले पनि मेरो मन भक्कानिन्छ ।
र, पछिल्लो महिना २ जना स्टाफ नर्स स्वास्थ शाखा प्रमुख पदम सरले मिलाइदिनुभयो । तिर्सना र सजना सिस्टर हिम्मत गरेर आउनुभयो, हामी गर्छौं भनेर। त्यसले गर्दा सिस्टरहरुलाई त केही हदसम्म सजिलो भयो तर म एक्ली डाक्टर । मेरो ब्याकमा डाक्टर नहुँदा म २४ सै घण्टा खटिनुपर्थ्यो र शारीरिक खटाई र मानसिक थकाइ अत्याधिक भएकाले म आफैं बिरामी परें । सलाईनको सहारा लिँदै मैले काम गरें । मेरो Hypoglycemia &Unstable BP हुँदा सिस्टरहरु आत्तिदै मलाई हेर्नुहुन्थ्यो । एक रात त धेरै गार्हो भयो । मैले धान्नै नसक्ने भएपछि मेरो ब्याकमा अर्का एक डाक्टरले अनकल बिरामीलाई निगरानी राख्दा धेरै समयपछि म मज्जाले निदाएछु ।
खाना र आराम समयमा नहुँदा मानव शरीर न हो, म बिरामी परेँ । बरेङको कोभिड अस्पतालको कामलाई सरहाना गर्दै गाउँपालिका सभामा अस्पतालको तर्फबाट मलाई सम्मान गर्नुभयो,यसले मेरो हिम्मत र जिम्मेवारी अझै बढ्यो ।
अस्पतालमा शुन्य बिरामी भएपछि अब त दिन २-३ दिन आफ्नो घर, बुवा आमालाई भेट्न जाउँ, आफै पनि बिरामी उपचारमा २४ घण्टा खटिँदा शारीरिक रूपमा कमजोर महसुस भएकोले केही दिन घर जान खाेज्दै थिए लकडाउन खुकुलो भएपछि फेरि बरेङ गाउँपालिकामा बिरामी बढ्न थालिसके । आज २-३ दिनमा नै हाम्रो अस्पतालको एचडीयू बेड पूरै भरियो।
बाटोमा यसो हेर्दा फेरि मानिसहरु हेल्चकृयाई गरी मास्क नलगाई हिडिरहेको देखिन्छ यसले अब फेरि संक्रमणलाई बढाउँछ । खोई यो चेन ब्रेक कहिले हुने हो ? हामीले कहिले आराम पाउने हो ?
(डा. लक्ष्मी पन्थी बाग्लुङ बरेङ गाउँपालिकाको अस्थायी कोभिड अस्पताल प्रमुख हुनुहुन्छ । )
डाक्टरकाे कोभिड डायरी
परिवार नियोजनको साधन जथाभावी प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यलाई खतरा
स्तन क्यान्सरका केही भ्रम र तथ्यबारे चिरफार
'ठिक छु' भन्दाभन्दै स्वास्थ्यकर्मी भतिजीको कोरोनाबाट ज्यान गयो
लगातार वर्षापछिको बाढी, पहिरोले अहिलेसम्म मानवीय क्षति कति ?
अनलाइन शिक्षाले बालबालिकामा बढायो टाढाको नदेख्ने समस्या
दशैंलगतै ग्यास्ट्रिकको समस्या लिएर धेरै जना पुग्छन् अस्पताल, यसरी ध्यान दिउँ खानपिनमा